Fa osuro a ɛfata kɔ Onyankopɔn anim (1-7)
Wɔn a wodi tumi no, ebinom a wɔkorɔn sen wɔn rehwɛ wɔn (8, 9)
Ahonyade yɛ ahuhude (10-20)
Wɔn a wɔn ani bere sika no, sika mmee wɔn (10)
Odwumayɛni nna yɛ no dɛ (12)
5 Bere biara a wobɛkɔ nokware Nyankopɔn no fi no, hwɛ w’anammɔn yiye.+ Eye sɛ wobɛkɔ hɔ na woakɔyɛ aso atie+ sen sɛ wobɛbɔ afɔre sɛnea nkwaseafo yɛ no,+ efisɛ wɔn de, wonnim sɛ nea wɔreyɛ no yɛ bɔne. 2 Mma w’ano mmpere wo, na wo koma nso, mma ɛmmpere ne ho nnka asɛm bi wɔ nokware Nyankopɔn no anim.+ Efisɛ nokware Nyankopɔn no wɔ soro, na wo de, asaase so na wowɔ. Ɛno nti na ɛsɛ sɛ wo nsɛm yɛ kakraa bi no.+ 3 Nneɛma pii a nnipa dwen ho na ɛde adaeso ba,+ na nsɛm bebrebe na ɛma wɔte ɔkwasea nsɛnkeka.+ 4 Sɛ wohyɛ Onyankopɔn bɔ a, ntwentwɛn wo nan ase sɛ wubedi so,+ efisɛ n’ani nnye nkwaseafo ho.+ Ɛbɔ a woahyɛ no, di so.+ 5 Eye sɛ worenhyɛ bɔ sen sɛ wobɛhyɛ bɔ na wunni so.+ 6 Mma w’ano nnnyigye wo* nnkɔ bɔne mu,+ na nka wɔ ɔbɔfo* no anim sɛ ɛyɛ mfomso.+ Adɛn nti na ɛsɛ sɛ woka biribi ma ɛno nti nokware Nyankopɔn no bo fuw na ɔsɛe wo nsa ano adwuma?+ 7 Na sɛnea nneɛma pii a nnipa dwen ho de adaeso ba no,+ saa ara na kasa dodow nso de ahuhude ba. Enti suro nokware Nyankopɔn no.+ 8 Sɛ wuhu sɛ obi hyɛ ohiani so, na ɔkyea atemmu, na ɔdan trenee ani wɔ wo mantam mu a, mma ɛnnyɛ wo nwonwa.+ Efisɛ saa ɔpanyin no, obi a ɔkorɔn sen no rehwɛ no, na ebinom nso wɔ hɔ a wɔkorɔn sen wɔn. 9 Bio nso, wɔkyɛ asaase no so aba ma wɔn nyinaa; ɔhene mpo, odidi asaase no so bi.+ 10 Nea n’ani bere dwetɛ no, dwetɛ remmee no da, na nea n’ani bere ahonyade nso, sika remmee no da.+ Eyi nso yɛ ahuhude.+ 11 Sɛ nneɛma pa dɔɔso a, wɔn a wodi nso dɔɔso.+ Na mfaso bɛn na ɛwɔ so ma ne wura? N’ani kɛkɛ na ɔde hwɛ.+ 12 Sɛ akoa didi kakraa bi oo, sɛ odidi pii oo, ne nna yɛ no dɛ. Na ɔdefo de, nneɛma pii a ɔwɔ no mma ontumi nna. 13 Awerɛhosɛm kɛse* bi wɔ hɔ a mahu wɔ wiase. Ɛne sɛ: Obi boaboa ahonyade ano sie ma ɛdan ɔhaw ma no. 14 Ɔde n’ahonyade no hyɛ adwuma mu, na ne dwetiri no hyew ma saa ahonyade no fi ne nsa. Enti bere a ɔbɛwo ba no, na onni hwee wɔ ne nsam.+ 15 Sɛnea onipa de adagyaw fi ne maame yam bae no, saa ara na ɔbɛsan akɔ.+ Na ɔrentumi mfa adwuma a ɔbrɛ yɛe no mu biribiara nkura nkɔ.+ 16 Eyi nso yɛ awerɛhosɛm kɛse:* Sɛnea onipa bae no, saa ara na ɔbɛsan akɔ; na mfaso bɛn na ɛwɔ hɔ ma nea ɔbrɛ ne ho yɛ adwuma gu mframa mu no?+ 17 Afei nso, da biara odidi wɔ sum mu, na ne haw, ne ne yare ne n’abufuw dɔɔso pii.+ 18 Biribi wɔ hɔ a mahu sɛ eye na ɛfata. Ɛno ne sɛ onipa bedidi na wanom na wanya anigye afi adwumaden a ɔbrɛ ne ho yɛ+ wɔ wiase no mu, adwumaden a ɔyɛ wɔ ne nkwa nna kakra a nokware Nyankopɔn no de ama no no nyinaa mu, efisɛ ɛno ne n’akatua.*+ 19 Bio nso, sɛ nokware Nyankopɔn no ma onipa nya sika ne ahonyade,+ na ɔma otumi de gye n’ani a, ɛsɛ sɛ oso n’akatua* no mu na ɔma n’ani gye n’adwumaden mu. Onyankopɔn akyɛde ne no.+ 20 N’adwene renkɔ ne nkwa nna a ɛretwam no so pii, efisɛ nokware Nyankopɔn no ma n’adwene kɔ anigye a wanya wɔ ne komam no so.+
^ Nt., “wo honam.”
^ Anaa “nea wɔasoma no.”
^ Anaa “ne kyɛfa.”